Home TORO FARANY AFRICAN Mpilalao Football Nizeriana Tantaran'i Victor Osimhen Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
LB dia manolotra ny tantara feno momba ny Genius Football Nizeriana amin'ny anarana hoe "Vic". Ny fitantaranay an'i Victor Osimhen momba ny fahazazana sy ny zava-misy momba an'i Untold Biography Facts dia mitondra anao ny tantara feno momba ny zava-nitranga miavaka hatramin'ny fahazazany hatramin'izao.
Ny Fiainana sy ny fivoaran'i Victor Osimhen. Credits sary: Vanguard, NigerianNewsDirect sy Twitter
Ny famakafakana dia ahitana ny fiainany voalohany / ny fiainany, ny fanabeazana / fananganana asa, ny fiainam-piandohana, ny lalana mankany amin'ny laza, ny fitomboan-tantara, ny fiainam-pianakaviana, ny fiainam-pianakaviana, ny zava-misy amin'ny fiainam-pianakaviana, ny fomba fiainana sy ny zava-misy kely fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra fa izy mpiady mahery tampoka manana maso ho an'ny fanatrarana tanjona tsara tarehy. Na dia izany aza, vitsy monja no mihevitra ny biolojia Victor Osimhen izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Tantara momba ny fahazazan-jaza ho an'i Victor Osimhen sy ny zava-misy momba ny Biografi Untold - Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Manomboka, ny anarany feno dia Victor James Osimhen. Victor Osimhen araka ny niantsoany matetika dia teraka tao amin'ny Andro faha-29 tamin'ny volana Desambra 1998 ho an'ny reniny sy ny rainy taloha, Elder Patrick Osimhen tao an-tanànan'i Lagos, Nigeria. Izy no farany amin'ny enina mirahalahy nateraky ny ray aman-dreniny mahafinaritra izay naseho etsy ambany.
Victor Osimhen Ray aman-dreny - Dadany- Elder Partick & tara tara. Sary: NizerianaNewsDirect sy IG
Ny ray aman-drenin'i Victor dia avy amin'ny fianakaviany avy any atsimon'i Nizeria atsimo indrindra amin'ny faritra Esan South East Local Government Area of ​​Edo State any Nigeria. Anaram-pianakaviana izay «Osimhen”Midika hoetsara Andriamanitra'amin'ny fitenim-paritra Ishan teratany.
Sahala amin'ireo mpilalao baolina kitra malaza any Nizeriana atsimo, i Victor Osimhen dia avy amin'ny fianakaviana tsy nahy. Talohan'ny nahaterahany, dia nanapa-kevitra ny hifindra monina any amin'ny tanànan'ny "ray aman-dreniny ny ray aman-dreniny"Lagos”Renivohitra ara-toekarena ao Nizeria. Na dia tany Lagos aza dia niatrika zava-tsarotra ny fianakaviana, ny iray izay nampihomehy azy fa i Victor kely, zaza amam-pianakaviana indray, dia natao hiatrika ny masoandro mahamay any Lagos izay nametrahan-dreny ny rano sachet ho famatsiana ny fidiram-bolany.
Victor Osimhen dia niara-nihalehibe niaraka tamin'ny rahalahiny Andrew sy 4 mpirahalahy hafa tany Olusosun, a tanàna kely manodidina an'i Oregun, Ikeja, Lagos. Ity vondrom-piarahamonina ity dia mandray ny iray amin'ireo toerana lehibe indrindra any Afrika. Nihalehibe tao anatin'ny taona niorenany, Victor Osimhen dia nihazona sy nanantona rano sachet ary trano hafa tao an-trano mba hahazoana vola ho an'ny fianarany sy ny fiveloman'ny fianakaviany. (TheNationOnlineng Reports).
Tantara momba ny fahazazan-jaza ho an'i Victor Osimhen sy ny zava-misy momba ny Biografi Untold - Fanabeazana sy fanabeazana
Olusosun Kilonga Sekoliny izay natrehany dia natao ho toerana fivoriana amin'ny baolina kitra ho an'ireo mpianatra rehetra sy tanora ao amin'ny vondron'olona.
Olusosun sekoly ambaratonga voalohany- Tao no nanombohan'ilay dia nandeha baolina kitra. Credit: LagosSchoolsOnline
Isaky ny hariva, ankizilahy be dia be i Victor no mandeha any amin'ny kianja filalaovana baolina mijery ny zokiny lahy izay mpilalao kintana baolina eo an-toerana ao amin'ny vondron'olona. Ny lahimatoan'ny fianakavian'izy ireo izay i Andrew no nandao ny fianarany mba hahazoana vola hividianana an'i Victor sy ny mpiray tam-po aminy hafa.
Aides hawking, nahay nilalao baolina ihany koa i Victor noho ny anadahiny, Andrew. Tena mafana fo momba an'i Chelsea FC izy raha nijery ny ekipa milalao amin'ny ivon-toerana mijery. Niaraka tamin'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviany izy dia mpankafy goavana amin'ny ekipan'ny Nizeriana (Super Eagles). Ny fanohanan'ny ekipa niaraka tamin'ny faniriany hilalao amin'ny fanatanjahantena dia namorona ny faniriana ho tonga matihanina.
Raha jerena fa ny zandriny lahy dia talenta bebe kokoa, voatery namela ny lalao hiatrika ny orinasan'ny gazety i Andrew. Nariany koa ny hevitra hanitarana ny fianarany, mba hahafahany manangona vola hanampiana ilay zandriny izay nino azy ho finoany.
Tantara momba ny fahazazan-jaza ho an'i Victor Osimhen sy ny zava-misy momba ny Biografi Untold - Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Tsy nanam-potoana firy ny nanofinan'ny fianakaviana fa rehefa nanamarika zavatra manokana momba an'i Victor ny mpitsikilo baolina kitra eto an-toerana ary avy eo dia nanasa azy tany amin'ny Ulitmate Strikers Academy any Lagos izay nahitany ny fitsapana nahomby voalohany azy.
Tamin'ny taona 2014, ny fampisehoan'i Victor Osimhen niaraka tamin'ny Ultimate Strikers dia nahita azy nantsoin'ny mpiara-miasa taminyh Amuneke hisolo tena ny ekipany U-17. Fanamarihana: Ny ekipam-pirenen'i U-17 nasionalista any Nizeria izay fantatra amin'ny anarana hoe Golden Eaglets, dia ekipa faralahy izay misolo tena ny tanin'i Nizeria amin'ny baolina kitra. Victor Osimhen dia nanampy tamin'ny ekipa ho mendrika ho an'ny U-17 FIFA World Cup izay natao tany Chili.
Ny fifaninanana 2015 FIFA U-17: Victor Nanomboka tsara i Osimhen tamin'ny fifaninanana raha nahatratra tanjona roa lehibe tamin'ity fifaninanana ity izy, nandresy am-po an-tapitrisany, anisan'izany ireo an'ny scouts eropeana nanodidina ny teny. Osimhen dia zava-dehibe tamin'ny fahombiazan'ny U-17 Nizeria tamin'ny FIFA World Cup tany Chile. Manampy ny fireneny handresy ny fifaninanana ny Nizeriana manan-talenta dia namoaka ny loka avo indrindra ihany koa ny loka scorer an'ny tanjona taorian'ny nandresena ny 10 tanjona ary koa ny Bola FIFA U-17 World Cup Silver.
Victor Osimhen manana ny FIFA U-17 World Cup Golden Boot sy Bola Bola an'ny FIFA World Cup. nahazoan-dalana: Jumia ary Hundustantimes
Tantara momba ny fahazazan-jaza ho an'i Victor Osimhen sy ny zava-misy momba ny Biografi Untold - Road to Fame Story
Taorian'ny amboara eran-tany dia nambara fa ireo klioba lehibe avy any Eropa, ny olona tia an'i Arsenal, ny tanànan'ny Man, ary i Tottenham Hotspur, dia taorian'ny nanompoany. Mahagaga ny nandavan'i Victor Osimhen ny tolotra rehetra satria klioba antonony afovoany no nanolotra azy ny vola lehibe indrindra.
Fotoana fohy taorian'ny nanovana azy hoe 2015 African Youth Player of the Year tamin'ny CAF Awards any Abuja tamin'ny Janoary 2016, nanambara tamin'ny izao tontolo izao i Osimhen fa hanohy ny asany matihanina amin'ny klioba Bundesliga Alemanina, Wolfsburg. Araka ny voalazany, ny antoka ao amin'ny fikambanana sy ny vola dia tena famporisihana ara-moraly ho an'ny fianakaviany ary aleony milalao ho an'ny klioba Alemanina fa any amin'ny faritra ambony any Eropa ihany.
Fijaliana any Alemana: Osimhen dia nanao sonia fifanekena mialoha ny telo taona sy tapany hatramin'ny jona 2020 ary nanatontosa ny lazany tamin'ny sidina alemana tamin'ny volana Mey 2017. Vantany vao nahavita efa-bolana nanendrena azy tamin'ny Bundesliga dia nanomboka nitroatra ny Nizeriana. Ny ratra an-tsaka dia nahatonga azy hiditra amin'ny fandidiana izay nahafatesana ho tonga tamin'ny fotoany voalohany. Ny famaranana amin'ity sehatra ambany ity, i Victor Osimhen (sary ambany etsy ambany) dia nanjary tsy voamarika intsony tamin'ny klioba ambony.
Victor Osimhen dia nanantena fanantenana rehefa niady tamin'ny ratra sy ny aretina tany Alemana. Loharano Twitter.
Nanohy ny takarivan'ny Osimhen taorian'ny faharerany tamin'ny ratra an-tsorony. Tamin'ity indray mitoraka ity, aretina dia nipoitra izany, nahatonga azy tsy hanadino ny vanim-potoana mialoha sy ny tena mampalahelo, tsy misy amin'ny fisafidianana kapila manerantany 2018 any Nizeria. Fantatrao ve?… Tao amin'ny hopitaly izy tamin'ny fotoana nisy ny Fiadiana ny Tompondaka Erantany 2018 FIFA.
Tantara momba ny fahazazan-jaza ho an'i Victor Osimhen sy ny zava-misy momba ny Biografi Untold - Mitsangàna amin'ny tantara
Naka an'i Osimhen momba ny vanim-potoana maharary 2 hivoaka avy amin'ny nofinofiny. Ny tsy fitovian-dàlana noho ny ratra sy ny aretina dia nahita azy nanatratra tanjona (0) baolina tany Wolfsburg, ka nanimba ny asany tao anatin'izany.
Nihetsika i Osimhen nanapa-kevitra ny handeha hiatrika fitsapana amin'ny fahavaratra miaraka amin'ny klioba Belziana Zulte Waregem sy Club Brugge, izay tamin'izany fotoana izany no tompon-daka nanjaka. INDRAY, Ny fahasalamany dia nahavoa ny vatany raha nararin'ny tazomoka izy ka nisy fiantraikany tamin'ny toe-batany ary nahatonga ireo klioba roa handà azy.
Tamin'ny 22 Aogositra 2018 no daty andriamanitry ny baolina kitra mamindrà fo aminy. Andro niainan'ny klioba Belzika Charleroi izy tamin'ny fifanarahana fampindramam-bola lavabe. Victor Osimhen dia nanao ny lalao voalohany nataony tamin'ny 22 septambra, nahazo ny tanjony voalohany amin'ny maha-matihanina azy. Taorian'ny lalao, hoy i Osimhen BBC Sport manana izynahita ny fahasambarany indray taorian'ny fiandrasana naharitra ela toy izany".
Nahita ny fahasambarany i Victor Osimhen taorian'ny fiandrasana naharitra ela toy izany. Ny trosa Goal
Ny Nizeriana marary nanam-pahombiazana niaraka tamin'ny sisin'ny Belzika, milalao lalao 36 ary manatratra tanjona 20, hira iray izay nahatonga ny klioba Charleroi, nanova ny safidin'izy ireo hahazoana azy mandritra ny trosa. Rehefa avy nanjaka tamin'ny baolina kitra tany Belzika dia nahatsapa ny Nizeriana fa fotoana tokony hihanihana miverina amin'ny alàlan'ny striker afrikanina nitarika azy taloha. Tamin'ny volana Jolay 2019 dia nanao hetsika ambony izy tamin'ny asany tamin'ny alalan'ny sonia ho an'ny Lille OSC.
Victor Osimhen Mitsangàna amin'ny tantaram-boninahitra. Sary: Goal
Tsy naratra noho ny ratra amin'ny soroka sy ny tazomoka dia nitombo avy amin'ny tanjaka mankany amin'ny tanjaka ny mpitari-tafika Nizeriana, niaritra ny fiakarana meteoric ho lasa fahatongavana INDRAY, iray amin'ireo fananana mafana indrindra any Afrika. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Tantara momba ny fahazazan-jaza ho an'i Victor Osimhen sy ny zava-misy momba ny Biografi Untold - Relationship Life
Tamin'ny fiakaran'ny lazany azy tany Eropa, azo antoka fa ny ankamaroan'ny mpankafy dia nanontany momba ny hoe Victor Osimhen, toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, dia manana sipa.
Iza no sakaizan'i Victor Osimhen? Sary: IG
Tsy azo lavina ny zava-misy fa ny toetra tsara nataon'i Osimhen anisan'izany ny fahatokiana, ny fahatokisana, ny asa mafy ary ny fanetren-tena dia tsy hahatonga ny vehivavy hino fa hanao sipa tsara kokoa izy.
Talohan'ny nanjary malaza dia voalaza fa i Oshimen dia nanisy ankizivavy manja iray antsoina hoe Blessing. Nandritra ny vanim-potoanan'ny fifandraisan'izy ireo dia samy nizara sary tsy tapaka teo amin'ny Instagram ny olon-tiany roa. Ny fiampangana an'i Osimhen tamin'ny sakaizany dia nambara ampahibemaso nandritra ny taona 2 talohan'ny nanapahany hevitra fa hanaisotra ny tadiny avy amin'ny sanganasan'ny media sosialy rehetra.
Fitiavan'i Victor Osimhen
Hatramin'ny nielezan'ny fampahalalam-baovao sosialy azy ny fampahalalana nataony dia mbola nisy ny tsaho, izay nilaza fa tsy sakaizan'i Osimhen i Blim fa ny vadiny nanambady. Ny fisavana amin'ny alàlan'ny haino aman-jery sosialy azy, dia tsy misy fampahafantarana momba ny fanambadiana na ny fanambadiany ho an'i Blessing. Na izany aza, mbola azo atao angamba ny manambady azy nefa aleony tsy hampahafantatra izany imasom-bahoaka.
Tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratana dia toa i Osimhen dia toa mpitovo ary naleony nifantoka tamin'ny asany, fa tsy nitady sipa na nanambara ampahibemaso ny fifandraisany.
Tantara momba ny fahazazan-jaza ho an'i Victor Osimhen sy ny zava-misy momba ny Biografi Untold - Fiainana manokana
Ny hahafantaranao an'i Victor Osimhen ny fiainana manokana tsy ho baolina dia hanampy anao hahazo sary tsara kokoa ny toetrany. Amin'ny fanombohana dia olona mahafantatra ny tena dikan'ny fitehirizana sy ny fikirizana, ny hafatra izay hita ao amin'ny sary mombamomba azy avy amin'ny Whatsapp.
"Tsy nanelingelina ahy akory aho tamin'ny sasany tamin'ireo fanehoan-kevitra ratsy sy zavatra ratsy nosoratany tamiko nandritra ny fotoana niarahako tao Wolfsburg,". Ary noho izany teniny izany, dia mora ataonao fa mora mandoka azy izy.
Ankoatra ny baolina kitra, tian'i Osimhen hihaino mozika Contemporary R&B miaraka amin'ny ankafiziny mbola tavela “I believe I can fly”, Ilay fantsom-peo nokapohin'ny mozika mozika R Kelly. Indraindray dia mihira ny hiran'i Kelly araka ny fombany izy mandritra ny fankalazana ny tanjony. Ao amin'ny sehatry ny mozika Nizeriana eo an-toerana, mifikitra amin'i Olamide i Osimhen ary ny làlana tiany indrindra avy amin'ny mpanakanto hip-hop Nizeriana dia 'mipetraka eo amin'ny seza fiandrian '.
Tantara momba ny fahazazan-jaza ho an'i Victor Osimhen sy ny zava-misy momba ny Biografi Untold - Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Victor Osimhen, izay lasa mofomamy amin'ny fianakaviany dia faly fa nanamboatra ny lalan'ny fianakaviany ho any amin'ny fahaleovan-tena ara-bola dia misaotra betsaka amin'ny baolina kitra. Ny olona rehetra ao amin'ny fianakaviana (araka ny voalaza eto ambany) izay nijoro teo aminy nandritra ny fotoana maizina dia mankafy ireo devoly feno izay entin'ny baolina kitra matihanina.
Ry mpianakavy Victor Osimhen. Ny trosa amin'ny NigerianNewsDirect
Momba ny Rain'i Victor Osimhen: I Pa Patrick Osimhen ihany no reny tokan-tena sy rain'i Victor Osimhen. Izy indray dia mpiandraikitra ny zanany lahy mandra-2015 rehefa natolony ny mpandraharaha frantsay Oliver Noah ny Noga Sports Management.
Dadan'i Victor Osimhen (faharoa avy any ankavanana), zanany lahy ary ekipa mpikarakara fanatanjahantena Noga. Ny trosa AllNigeriaSoccer
Rehefa mpiambina ara-dalàna ny zanany lahy i Patrick Osimhen, dia nifandona tamin'ny raharaha hafa nanandrana nandoa azy izy mba hividianana vola amin'ny famindrana ny zanany lahy tany Wolfsburg. Ireo andian'olona ireo raha niezaka nanivana azy, nifidy ny hiatrehana ny zanany lahimatoany, Andrew Osimhen momba ny fifampiraharahana momba ny fifanarahana ho an'i Victor Osimhen.
Momba ny Renin'i Victor Osimhen: Araka ny tatitra dia hita fa tara ny renin'i Victor Osimhen. Ny mpiady Nizeriana tamin'ny fotoana nanoratana dia manome voninahitra ny reniny amin'ny alàlan'ny fananana ny sariny ho sary mombamomba azy ao amin'ny kaontiny instagram.
Renin'i Victor Osimhen. Credit any Instagram
Victor Osimhnen Anadahy: Manana mpirahalahy enina i Victor amin'ny ankapobeny ary i Andrew Osimhen dia be mpitia noho ny iray tam-po aminy. Ny fitiavan'i Victor Osimhen ho an'ny rahavaviny dia tsy misy fetrany. Fantatrao ve?… Natokany indray mandeha ny Rahalahy Boot Award iray tamin'ny iray rahavaviny taorian'ny niterahany zaza zazavavy tamin'ny fotoana nahazoany ny mari-pankasitrahana, manodidina ny Novambra 2015.
Tantara momba ny fahazazan-jaza ho an'i Victor Osimhen sy ny zava-misy momba ny Biografi Untold - Lifestyle
Tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratana dia nitombo ny vidin'ny tsenan'ny Victor Osimhen mihoatra ny mil 13,00. € araka Market Market. Raha jerena amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao ara-tsosialy azy, ny vola karama dia tena milamina tanteraka amin'ny fomba fiaina mamirapiratra mora voamariky fiara amam-boninahitra, trano ary indraindray zazavavy.
Victor Osimhen dia miaina fomba fiaina tsotra. Credit any Instagram
Raha atao jery todika avy amin'ny fitaizan'ny fianakavian-janany sy ny fianakaviany mahantra, azo antoka fa tokony ho marim-pototra tsara i Osimhen ary tokony hahalala ny fomba fitantanana ny volany.
Tantara momba ny fahazazan-jaza ho an'i Victor Osimhen sy ny zava-misy momba ny Biografi Untold - Untold Facts
Fifandirana ao amin'ny fianakaviana: Ny hoavin'i Victor Osimhen dia nipoaka tampoka tao anatin'ny fisafotofotoana taorian'ny krizy nahaterahan'ny fianarany. Nifandona ny mpikambana ao amin'ny fianakaviany izay tokony hisolo tena an'ilay mpilalao.
Araka ny tatitra an-tserasera, Michael dadatoan'i Osimhen, indray mandeha dia mitarika ny vondron'olona iray raha i Andrew, ilay lohan-dehilahy zokiny amin'ny vondrona hafa. Ireo vondrona roa ireo dia nanana ny maso ivon-dry zareo izay niady tamin'ny famindrana vola sy ny zo marina mba hisolo tena ny mpilalao. Ny krizy mianakavy dia misy refy vaovao rehefa nipoitra ihany koa ny fampitam-baovao fa ny rain'i Osimhen dia nokapohin'ireo jiolahimboto noho ny fandavany ny fankatoavana ny hetsiky ny mpilalao tany Wolfsburg. Taty aoriana dia noporofoina ho diso. Fotoana kely talohan'ny nifaranan'ny krizy mianakavy.
Ny klioba Nizeriana Manam-bola: Tamin'ny Janoary 1, 2017, i Victor Osimhen dia nafindra $ $3,970,225 ho an'ny klioba Alemanina VfL Wolfsburg avy ao amin'ny Ultimate Striker Academy, klioba eo an-toerana ao Lagos.
Fantatrao ve?… Ny saram-pitaterana dia nahatonga azy ho iray amin'ireo mpilalao lafo vidy indrindra hanasonia azy mivantana avy amin'ny ekipam-pitaizana any Afrika ho any amin'ny ekipa Eoropeana ambony. Mikasika ny taham-panakalozana tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratana, ny Akademia Ultimate Strikers dia nahazo vola marobe 1.4 lavitrisa Naira avy amin'ny famindrana an'i Victor Osimhen.
Fa maninona izy no nisintaka tany Belzika: Betsaka ny Nizeriana te-hanomboka ny asany eoropeana ao amin'ny Diviziona Voalohany ao Belgian A. Ity ligy ity dia Meky ho an'ny mpilalao baolina nizeriana nandritra ny taona maro sy ilay nanome an'i Victor Osimhen ny baolina kitra eropeana azy.
Fantatrao ve?… Ny mpanazatra super eglistiana taloha dia i Stephen Keshi izay nitarika ny fivoahan'ny talenta Nizeriana hameno an'i Belzika tamin'ny faran'ny 1980. Ireo tia an'i Daniel Amokachi, Victor Ikpeba, ny alahady Oliseh ary Alloy Agu dia samy nanomboka ny asany tany Belzika. Fanamarihana: tao amin'ny Belzika Celestine Babayaro no nahazo ny Ebony kiraro azony ho an'ny mpilalao afrikanina tsara indrindra amin'ny ligy belzianina.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra noho ny namakiana ny tantaranay momba ny fahazazan'i Victor Osimhen sy ny Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Ny tantaran'ny Jay-Jay Okocha momba ny tantaram-pitiavam-pitiavam-bazana mbola tsy fantatra
Kelechi Iheanacho tantaram-pitiavana momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra momba ny tantaram-piainana
Ahmed Musa tantaran'ny tantaram-piainana tsy hita isa